Paul Scholes Oo Sharxay Ka Qaabkii Ay Man United Iskugu Dayeen In Ay Ronaldinho Kaga Aarsadaan | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Paul Scholes Oo Sharxay Ka Qaabkii Ay Man United Iskugu Dayeen In Ay Ronaldinho Kaga Aarsadaan
Halyaygii Manchester United ee Paul Scholes ayaa sharaxaad buuxda ka bixiyay qaabka ay kooxdiisa Manchester United uga niyadjabtay in Ronaldinho uu waqitigii ugu danbeeyay maskaxdiisa badalay oo uu iska diiday ku biirista Old Traffrod isla markaana uu ka doortay in uu Camp Nou uga ciyaaro Barcelona.
Paul Scholes ayaa cadeeyay in ciyaartoyda kooxdiisii Manchester United ay ku tashadeen in ay ka aarsadaan Ronaldinho isla markii uu doortay Barcelona ee uu iska diiday Red Devils. Barcelona iyo Manchester United ayaa kulan saaxiibtinimo ku balansanaa isla markii uu Ronaldinho ku biiray kooxda Balaugrana.
Wuxuuna Paul Scholes sheegay in ay go’aansadeen in Ronaldinho ay garoonka dhexdiisa kaga aarsadaan oo ay laad la dhacaan marka ay ciyaartu socoto inkasta oo uu ahaa kulan saaxiibtinimo. Ronaldinho ayaa isla markii uu Barcelona ku biiray laba sano kadib ku guulaystay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon d’Orka.
Paul Scholes ayaa isaga oo ka hadlaya qaabkii uu Ronaldinho ugu dhawaa Man United yidhi: “Waxaan filayaa in Ronaldinho uu waqti aad ugu dhawaa, waxaan filayaa in haddii ay taasi dhici lahayd aan jeclaan lahaa in aan isaga la ciyaaro. Waxa uu ahaa mid cajiib ah”.
Scholes oo ka hadlaya kulankii saaxiibtinimo ee Man Uited iyo Barcelona ee ay Ronaldiho iskaga horyimaadeen markii uu United diiday ayaa yidhi: “Waxaan sanadkaas xusuustaa in aanu kulan xili ciyaareeda ka horeeyay la lahayn, waxayna u muuqatay in uu anaga noo saxiixayo wuxuuna ku dhamaystay in uu Barcelona u saxiixay waxaananu xili ciyaareedka ka hor la ciyaaraynay Barcelona”.
Scholes ayaan qarin qaabkii ay u doonayeen in ay uga aarsadaan Ronaldinho wuxuuna yidhi: ” Sababtoo ah in aanu anaga noo saxiixin, qof kastaaba waxa uu doonayay in uu isaga kabaha ku joojiyo oo uu laago, laakiin ma awoodaysid in aad isaga u dhawaato, waa ciyaartoy layaableh, waxaan jeclaa in aan isaga ku arko United lakaiin may dhicin”.